आईपीओमा बुक बिल्डिङ भनेको के हो ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
आईपीओमा बुक बिल्डिङ भनेको के हो ?
काठमाडौं – केही दिनअघि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ सम्वन्धि निर्देशिकाको मस्यौदामा राय सुझाव मागेको थियो । योसँगै कतिपय लगानीकर्ताले अब आईपीओे रू. १०० मा नपाइने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
कम्पनीले त्यसमा २ लाख कित्ता बुक बिल्डिङ प्रक्रिया मार्फत विक्री गर्न आह्वान गर्न सक्छ । यसमा सबैभन्दा बढी कुन मूल्यमा सबै (२ लाख) कित्ता विक्री हुन सक्छ, त्यो हेरिन्छ र त्यही मूल्यमा आईपीओ जारी गरिन्छ ।
बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा अपनाइने लीलामी प्रक्रियालाई ‘डच अक्शन’ भनिन्छ ।
सामान्य लीलामीमा खरीदकर्ताले तिर्न चाहेको मूल्य र तिर्ने मूल्य एउटै हुन्छ (कि त उसले खरीद गर्नै पाउँदैन) । डच अक्शनमा भने केही खरीदकर्ताले साँच्चै तिर्ने मूल्य तिर्न चाहेको मूल्यभन्दा कम हुन्छ । लीलामीमा भाग लिनेको हकमा मात्र यस्तो हो । सर्वसाधारण खरीदकर्ताले तिर्ने मूल्य भने एउटै हुन्छ ।
विकसित राष्ट्रहरूको शेयर बजारमा बुक बिल्डिङ प्रणाली नै प्रचलनमा छ । आर्थिक अभियानबाट